7 Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem
Europe nwere omenaala na akụrụngwa bara ụba nke ukwuu, na-eme ya ebe ezumike a ma ama n’etiti ndị njem dị elu. Ngosi ihe mgbe ochie, ogige, akara ala mara mma, na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ selectionụ .ụ nri. Na mpempe, ọ bụrụ na ị lara ezumike nká, enwere ọtụtụ ụzọ ọmarịcha ụzọ ị ga - esi tinye onwe gị n'obodo ọbụla dị na Europe. Otú ọ dị, obodo ole na ole dị mfe ịnyagharị na ịchọpụta maka ndị njem dị elu. Mgbe ị na-eme atụmatụ ezumike gị na Europe, Ihe onye ọ bụla ga - eme njem ọ ga - elebara anya bụ ahụ ike gị, nnweta isi na-adọrọ mmasị na-eme ihe, njem kacha mma, na mgbakwunye na mmefu ego na oge ezumike.
Ya mere, anyị ewerela ụfọdụ n'ime obodo kachasị mma ịga na Europe maka ndị njem dị elu. Ya mere, ị na-anabata gị iso njem anyị na 7 obodo ukwu-enyi na Europe.
1. Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem: Rome, Italy
Rome bụ nnukwu obodo ịga leta na Europe maka ndị njem dị elu. Na obodo ochie nke Rome, ọtụtụ nkiri, hotels, na ụlọ oriri na ọ areụ areụ zuru ezu maka ndị agadi na oche nkwagharị. Nke a pụtara na ụzọ akụkụ obodo niile nwere oghere dị warara, obodo ahụ dịkwa larịị, yabụ agbanyeghị mgbatị ahụ gị, Ọ ga-adịrị gị mfe ijegharị.
Ezie na Rome na-aka nke ọma jupụtara ke akwa oge, ma ọ bụrụ na ị na njem anya-oge, na ọdịda, ọmụmaatụ, ga-enwe Rome naanị ihe niile gbasara gị. Na mgbakwunye, ọnụ ahịa ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na njem na-agbadakarị oge, Ọzọkwa, wonkwesighi ichegbu onwe gị banyere ịgbazite ụgbọ ala, n'ihi na ị ga - enwe ike iji ụgbọ okporo ụkwụ gaa Rome n'ụzọ ọ bụla na Europe. Ọ dịghị ihe dị mfe karịa ka ọ dị ụgbọ okporo ígwè njem n'ime ụgbọ elu Trenitalia nke dị elu na ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ. Na mgbakwunye na nkasi obi na nnukwu ụgbọ oloko, ị nwere ike ịnụ ụtọ ego pụrụ iche na tiketi ụgbọ elu maka ndị okenye.
2. Milan Na .tali
Duomo na Leonardo De Vinci ‘Nri Anyasị Ikpeazụ’ mere ka Milan bụrụ paradaịs maka ndị nka na ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme n’anya. Ghara ịbụ ihe owuwu ụlọ, Milan nwere ezigbo enyi na ndị njem, ọ nwetakwala a 2016 Nweta onyinye nturu ugo EU. N'ihi ya Milan bụ otu n'ime obodo kachasị mma ịga na Europe maka ndị njem dị elu.
Ọ bụrụ na ị gaferela afọ 60 wee dịrị njikere maka ibi ndụ mara mma, mgbe ahụ ị ga - enwe oge dị ịtụnanya na Milan. The Italian nri, na pụtara ije nke Basilicas, art veranda, na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ga-eme ka ị nwee mmetụta nke ịbụ eze. Mgbe ọ nọ na Milano, should kwesịrị ị na-esonyere klas nri nri pasita n'ihi na ọ naghị egbu oge ịmụta ihe onyinye ihe ọastaụ perfectụ pasta zuru oke ka ị wee nwee ike meghachite la dolce vita n'ụlọ.
3. Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem: eji, Belgium
Somefọdụ na-ekwu na Bruges bụ obodo kachasị ochie echekwara na Europe. Okporo ụzọ Cobblestone, ụlọ ndị mara mma, Thlọ nka, ha nile na eme Bruges nnukwu njem njem na Europe maka ndi njem di elu. Ọzọkwa, enwere ọwa mmiri ebe ị nwere ike iburu njem na-enwe mmasị na Bruges na-enweghị ịme nzọụkwụ, Ahụmahụ onye okenye ọ bụla ga-enwe ekele maka ya. ma, ma ọ bụrụ na ị ka masị ịchọta obodo n’ụkwụ, enweghị nchekasị, Ọgwụ bụ obodo jikọtara ọnụ. Ya mere, O zuru oke maka ndị njem njem n'ogo ọ bụla.
Ikwesiri ịrara onwe gị nye ma ọ dịkarịa ala 3-4 ụbọchị iji gafere 80 nke ọwa mmiri nke obodo ahụ ma zuru ike na ọdọ mmiri Minnewater. Nnukwu ọrụ ọzọ dị na Bruges bụ ahịa maka ụfọdụ ihe ncheta maka ezinụlọ.
Traingbọ okporo ígwè na Bruges dị nso 10-20 Nkeji oge ị na-aga site n’etiti obodo, yabụ ị nwere ike ịga ebe ọ bụla na Belgium na UK.
Brussels na Bruges site na Ọzụzụ
Antwerp ruo Bruges site na Ọzụzụ
Brussels na Vienna site na Ọzụzụ
Gredit to Bruges by Train
Mụ na ụgbọ oloko si Paris, Basel, Zurich, na Munich, Baden-Baden obodo dị n'etiti ndị njem dị mfe inweta. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu obodo mepere emepe ka Berlin, ọ bụ ezigbo ndụ. Germany bụ ebe obibi 900 spa ntụrụndụ, ma ntụrụndụ Baden-Baden na-achụpụ ha niile.
Ezumike ezumike na Baden-Baden bụ nhọrọ ezumike zuru oke maka ndị njem dị elu na Europe. Ighalo nwayọ, ọgwụgwọ mineral na apịtị spa, ọmarịcha ubi dị ka Igwu, mehe iphe dụ ẹji. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-arụsi ọrụ ike na ezumike, mgbe ahụ enwere klọb golf na klọb egwuregwu na Baden-Baden n'ihi na ị na-eleta.
Ọ ga - esiri ọtụtụ ndị njem ike na Europe ịga njem gburugburu, n'ihi ugwu na okporo ụzọ dị egwu. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịghọta ma ọ bụrụ n’obodo nke nrọ gị kachasị mma maka ikike anụ ahụ gị. Toga njem obodo ukwu nwere enyi na Europe dị ezigbo mkpa dịka mkpuchi mkpuchi njem. Ugwu anyi 7 obodo ị ga-eleta maka ndị njem ga - edetu atụmatụ obodo ndị kacha enweta na Europe maka ndị okenye.
Berlin na Baden-Baden site na Ọzụzụ
Munich na Baden-Baden site na Ọzụzụ
Zurich na Baden-Baden nke Ọzụzụ Zụ
Basel ruo Baden-Baden site na Ọkọni
5. Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem: Berlin, Germany
Ngosi ihe mgbe ochie na akara ala banyere WWII na agha oyi, mee Berlin ka ọ bụrụ ebe dị egwu maka ndị njem nọ na Europe. Berlin ewepụghị na ụgbọ njem ọha na-adị mma nke ukwuu, ma ụgbọ ala ma n'okpuru ala. Ọ bụrụ n’ịdị mma, ị nwere ike nyochaa obodo ahụ na njem Segway.
Ogige ntụrụndụ ọtụtụ ndị dị na Berlin zuru oke maka mgbagharị ehihie na picnics, na ọwa ụzọ art bụ nnukwu nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe dị jụụ na ọrụ ọdịnala karịa ịgagharị etiti ebe ọrụ.
6. Amsterdam, Mba netherland
Ya na ọmarịcha ụzọ ya, Amsterdam bụ nnukwu ebe njem maka ndị njem dị elu na Europe. Amsterdam bụ otu n'ime obodo kachasị mma ịga na Netherlands, ekele maka izu ike ya na ogo ya. Amsterdam dị obere ma e jiri ya tụnyere obodo Europe ndị ọzọ, yabụ na ịgaghị eme ka ị gbaa ọsọ ma nwee nchegbu banyere ilegharị anya.
O buru na ike gwuru gi n’obodo na-aru oru, gaa na mpụga obodo ahụ ma ama ma ọ bụ tulip ubi, ma ọ bụrụ na ị na-eme njem oge opupu ihe ubi. Ma ọ bụ ọ bụrụ n’ịdị ahụ dị mma, ịgbazite igwe kwụ otu ebe na ịnya ụgbọ ala n’obodo mara mma bụ echiche dị egwu.
7. Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem: Vienna, Austria
Ihe owuwu ụlọ, opera, na obí eze na-eme Vienna njem dị ịtụnanya maka ndị njem. Y’oburu n’iru na oge nnogbu ndi a n’ime ndu gi oge inwere ike itukwu ala ma rie nkpuru nke oru ike, gawazie Vienna. Ọzọkwa, Vienna bụ obodo nke abụọ na-anaghị anabata nke ọma na Europe maka ndị njem na-agagharị agagharị na-enweghị oke.
Ogwe kọfị Austrian 'ụlọ dị ndụ' achịcha achicha na schnitzel Austrian, na-ekwe nkwa na ị ga-enwerịrị ihe agaghị echefu echefu. Maka akụkụ ọdịbendị nke njem njem gaa n'ụlọ egwu opera dị egwu maka ngosi. Ka emechara, Vienna bụ ebe Mozart na Schubert dere ihe ha, obodo egwu na nka.
Obí eze ahụ dị Belvedere bụ otu n'ime obodo a na-ahụ anya na Vienna, gbara ya gburugburu na ifuru ubi na isi iyi, ọ bụ ntụpọ ịnọdụ ọdụ ma kporie ndụ.
Ebe etiti obodo dị 5 nkeji ịpụ site na ọdụ ụgbọ oloko etiti. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-esi mba ndị agbata obi abịa, Ọ nweghị ihe dị mfe karịa njem gaa Vienna.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta azụmahịa tiketi ụgbọ ala dị ọnụ ala na ụzọ ị ga-aga n'obodo ọ bụla na ndepụta anyị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “7 Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/europe-visit-senior-travelers/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)